I-WaterProof Sewing Thread, I-Polyester Emanzi Ephikisayo I-Thread Wholesaler
I-MH WaterProof Thread Sewing inephetho elikhethekile lokumelana namanzi
I-MH intambo yokuthunga engenamanzi inomphela okhethekile wokumelana namanzi okuvimbela umphumela we-capillary, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ukuthi akukho manzi athathwe ngentambo. Uma kusetshenziselwa ingxabano efanele yokuthutha, ukuthuthwa kwamanzi ngokusebenzisa umgodi wesinaliti kuvinjelwe.
I-MH intambo yokuthunga engenamanzi inekhono elihle lokulwa nokungcola futhi ligcina ukuhlanzeka isikhathi eside; i-weathering ukumelana nokumelana nokuphila isikhathi eside, ukumelana kwe-UV, ukuxiliswa kwe-oxidation; ukumelana okunamandla nokusikhipha izinyembezi, izici zokulwa nokuqeda; ukubheka kangcono ukugqoka.
Ukucaciswa: Usayizi ojwayelekile ngu-20/2, 30/3, 40/3
Umbala: ngemibala engama-800, ingalingana ngokuphelele nendwangu ethukiwe.
Izici zomkhiqizo: Ukusebenza okuphakeme kwamanzi, i-Gentle Luster, Amandla amakhulu we Seam nokubukeka, Ukukhiqiza Okuphezulu, Ububanzi Bombala Oningiliziwe, Ukuphikiswa Okuphezulu Kwamakhemikhali
Izicelo: Kufanelekile ukuthunga amatshe okugcina impahla, izimoto, imikhumbi, izitshalo, imayini, amaredi okuthutha, izitimela, amabhizinisi, ikhava yezimpahla zezolimo, njll. Ibuye isetshenziswe kakhulu ekugqoka, imikhiqizo yezempi, i-adventure ngaphandle, ukuvakasha kwangaphandle nezinye izindawo.
30/3 3000y Thread Sewing Thread
I-20S / 2 Thread Sewing Thread